छोरी जिस्काएको भनेर अर बीले झन्डै मा,रेन, “आना नफर जदिद” भन्दै माफी माँ गे – पुरा पढ्नुहोस्……
भगवान घिमिरे, भर्खरै कतार आएका थियौं । रहनसहन केही थाहा थिएन । अलखोर भन्ने शहरको भिल्ला नम्बर ५ मा ३५ जना बस्थ्यौं । एक दिन ४/५ जना चार तल्ला माथि छतमा बसेर भुइँतल्लाको किचेनमा खाना बनाइरहेका साथीहरुसँग अलि च’र्को स्वरमा कुरा गरिरहेका थियौं ।
यत्तिकैमा पारिपट्टिको छतमा रहेकी एउटी केटीले अरबी भाषामा हामीलाई झ’पार्न थाली । उसले सम्झिछ कि हामीले उसलाई जि’स्क्याउँदै छौं ।
रि’सले भु’त्भुताउँदै तल झरी । फेरि उसकी आमा छतमा आएर गाली गर्न पो लागिन् । गालीले सातोपुत्लो उडेर हामी तल भुइँतल्लामा झर्‍यौं । हामीलाई न त अरबिक नै आउँथ्यो, नत अंग्रेजी नै ।
त्यसैले हामी कुनै सफाई दिन लागेनौं । केहीबेर पछि एकजना अरबी ल्याण्डक्रुजर गाडीमा आएर हाम्रो गेट बाहिर आएर हर्न बजाउन थाल्यो ।
साथीहरु ड’रले थ’र्कमान भैहाले । हामीले अनुमान लगायौं, ती महिलाले बुढालाई भनिछ र बुढो चैं हामीलाई झ’पार्न आयो । उसले गाडीमै बसेर गा’ली गर्न थाल्यो । पुलिस बोलाउने जस्तो कुरा गरेझैं लाग्यो ।
अब यो यत्तिकै जाँदैन गएर माफ मागौं भनेको, सबै साथी ड’राए । जब’र्जस्ती गाडीमा हालेर पुलिसमा लग्यो भने, कु’ट्यो या कम्पनीको अफिसमा पुर्‍याउला भनेर साथीहरु डरा’एका थिए ।
Prevराज्यलाई चुनौति दिदै धनकुटाकी कांग्रेस नेतृले बना,ईन् सरकारी रकममा निजी घर (भि,डियो सहित)
Nextबच्चा काटुनमा भेटियको नाटक रहेछ, भाग्य न्यौपाने भरखरै पुगेर गरे सबै पर्दाफास (भिडियो सहित)
२ दिनमै लाखौले हेरेर ट्रेन्डिंगमा पर्न सफल सागर आलेको दोश्रो गित “बिर्सनै गारो भो” भिडियो सहित
डोटीमा जीप दुर्घटना ….
कमला घिमिरेको पʼढाइमा असर पर्यो भन्दै राजु परियार मिʼडियामा,कमलाको बुबालाई मिडियाबाटै यस्तो संʼदेश (भिडियो सहित)
रुस विश्वकप शुरु हुन केही समय बाँकी : इतिहास रच्ने दाउमा यी पाँच चर्चित कप्तान(कून-कून हून त ? हेर्नूहोस)